Igolide Elifakwe Ingubo Yezingane I-Pin Enamel Ephansi nge-Epoxy Coating
Usayizi: cishe u-4cm
Uhlangothi olungemuva: emuva okuyiphini ngepini yokuphepha
Ukupakisha: Isikhwama se-poly / ikhadi elisekelwa ngokwezifiso.
Inqubo Technique: udini, ufe ekubunjweni, wokucwebezelisa, Plating, koqweqwe lwawo ezithambile, epoxy, QC, emaphaketheni.
Ubuciko: koqweqwe lwawo oluthambile + epoxy
1. Ingabe uyimboni?
YEBO, siyimboni enezitifiketi ze-ISO ne-TUV.
2. Sinombono omuhle, ungasiklama?
Singakwenzela ubuciko bokukhiqiza ngokuya ngamafayela alandelayo: I-JPG, PNG, PDF, AI, CDR, njll.
3. kuthiwani nge-MOQ?
4. Ngingathola isikhathi esingakanani ukuthunyelwa kwe-oda lami ngemuva kokufaka i-oda?
Isikhathi sokuguqula sincike kubuningi be-oda nobuciko obuhlukile.
Imvamisa, kuzungeza isonto elilodwa lamasampula ngemuva kokuqinisekiswa kobuciko; Izinsuku eziyi-10-20 zokukhiqiza ngobuningi.
5. Ngingathembela kanjani kukhwalithi yakho?
Ngaphambi kokuthunyelwa, sizokukhombisa izithombe namavidiyo wokuhlola okuzungezile, noma yiziphi izinkinga, esingazilungisa ngaphambi kokuthunyelwa.
Ngisho nezinkinga zikhona uma uthola umkhiqizo, sinensizakalo enhle kakhulu yokuthengisa ngemuva kokuxazulula isisombululo esihle uze uneliseke.
Ngaphezu kwalokho, sincoma amakhasimende ukuthi enze i-Trade Assurance Order ukuze i-oda ngalinye libe ngaphansi kokuvikelwa kweqembu le-Alibaba, elihlinzeka ngomuzwa wokuphepha kubo bobabili.
6. Kuthiwani ngemigomo yokukhokha?
Singamukela iT / T, PayPal, WU, MG, njll. 30% -50% idiphozi ukuqala i-oda, ibhalansi ingaqedwa ngaphambi kokuthunyelwa. Noma yiziphi ezinye izidingo zemigomo yokukhokha kungaxoxiswana ngazo.
7. Ngingakhetha indlela yokuthumela?
Kunjalo! NguLwandle, Ngomoya noma Ngezithunywa: I-FedEx, i-TNT, i-DHL, i-UPS, njll. Ungakhetha noma yiluphi uhlobo lwendlela yokuthumela efanelekile kuwe.
Langaphambilini Igolide Elicwebezelwe Imedali Yensimbi Ngokwezifiso Yenza Ibheji Lomklomelo Wesoft Soft
Olandelayo: Igolide Plated Metal Ibheji Soft Koqweqwe Lwawoyela Pin
Ikati Koqweqwe Lwe-Pin
Ingubo Pin Brooch
Ngokwezifiso Lapel Pin
Amasethi o-koqweqwe lwawo
Izikhonkwane Zezinhlamvu Zezempi
I-Hard Enamel Pin Design yangokwesithenjwa
Ngokwezifiso koqweqwe lwawo Pin Maker Cute Design Yellow Flow ...
Custom Design Ezemidlalo Amabheji Football Club Zinc ...
Metal yezandla Igolide Plap Lapel Pin ngokwezifiso Desig ...